मलेसियाबाट नेपाल आउँदा पालना गर्नुपर्ने मुख्य मापदण्डहरु यस्ता छन ! - ramechhapkhabar.com
मलेसियाबाट नेपाल आउँदा पालना गर्नुपर्ने मुख्य मापदण्डहरु यस्ता छन !
नेपाल पुग्ने समयले ७२ घण्टाभित्र कोभिड-१९ परीक्षण गरेको फोटो एवं बारकोड/QR Code सहितको पि.सि.आर. नेगेटिभ रिपोर्टहुनु पर्नेछ ।
कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको पूरा मात्रा लगाएको। खोपको पूरा मात्रा नलगाएको व्यक्तिहरु होटल क्वारिण्टिनमा बस्नु पर्ने भएकोले सो को लागि तोकिएका होटलहरुमा कम्तिमा ७ दिनको होटल बुकिङ्ग।
एयरपोर्ट प्रस्थान गर्नुपूर्व CCMC फर्म भरी र सो को वारकोड सहितको स्क्रिन फोटो लिनुहोला र प्रिन्ट गर्नुहोला।
कोभिड महामारी सुरु भएको २० महिनाभन्दा बढी भइसक्यो र अब, हामी अन्ततः राहतको सास फेर्न सक्छौं कम्पनी व्यवसायहरू फेरि एक पटक सञ्चालन भए पनि रोजगारदाताहरूले धेरै ठूलो स”मस्या सामना गर्दै छन् त्यो हो विदेशी कामदारहरूको अभाव।
देशलाई अझै पनि निर्माण र वृक्षारोपण क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको सेवा चाहिन्छ तर अन्य क्षेत्रमा पनि धेरै महसुस भएको छ भन्ने कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौं।महामारीका कारण धेरै पाँचतारे र बजेट होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि सबैभन्दा ठूलो मा”र होटल उद्योगलगायतलाई परेको छ ।
उनीहरूका धेरै विदेशी कामदारहरू पनि आफ्नो गृहनगरमा फर्किएका थिए र आफूलाई टिकाउन अन्य कामहरू खोजिरहेका थिए। यसले गर्दा होटेल संघहरूले विदेशी कामदारहरूलाई काममा लैजानका लागि प्र”तिबन्धहरू खुकुलो पार्न सरकारसँग माग गरेका थिए। होटल सञ्चालनमा धमाधम सुरु भएदेखि नै धेरै होटेल मालिकहरूले कम पारिश्रमिक र जागिरका लागि अयोग्य लगायतका विभिन्न कारणले स्थानीयलाई काममा लैजान समस्या भएको बताए ।